एडमंड हली जीवनी। आविष्कार र शोषण | नेटवर्क मौसम विज्ञान
तपाईको जीवनमा केहि समय तपाईले सुन्नुभएको छ वा हेर्नको लागि पर्याप्त भाग्यशाली हुनुभएको छ ह्याली धूमकेतु। आज हामी यसको अन्वेषकको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौं, एडमंड हली। उहाँ एक महत्त्वपूर्ण अंग्रेजी वैज्ञानिक हुनुहुन्छ जुन विश्वभरी नै परिचित छ र उही हो जसले धूमकेतुको कक्षाको बारेमा भविष्यवाणी गरेका थिए जसको नाममा उनको सम्मान आयो। यद्यपि उनी वैज्ञानिक छन्, उनी जहिले पनि एक खगोलविद्को रूपमा धेरै सम्झिन्छन्। तथापि, उनको जीवन खगोल विज्ञानमा सीमित थिएन, तर गणित, मौसम विज्ञान, भौतिकी र भूभौतिकी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण खोजहरू गरे।
यी सबै कारणहरूको लागि, हामी लेख एडमन्ड ह्याली र उनको जीवनीलाई समर्पण गर्न गइरहेका छौं।
1 एडमन्ड ह्याली को थिए?
2 विज्ञानमा योगदान
3 एडमन्ड हेली लिगेसी
एडमन्ड ह्याली को थिए?
यस वैज्ञानिकको लागि ठूलो योगदानकर्ता थियो इसहाक न्यूटन शरीरको गुरुत्वाकर्षण आकर्षण मा गरिएको काम मा। उहाँ पहिलो वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो जसले भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि पृथ्वीमा समय समयमा धूमकेतुहरू आउनेछन् किनभने यी धूमकेतुहरूको पनि निश्चित कक्षा थियो।
उहाँ नोभेम्बर,, १ 8 मा लन्डनमा जन्मनुभएको थियो र जनवरी १ 1656, १14२ मा लन्डनमा पनि उनको मृत्यु भयो। हेग्समा जन्मेका र डर्बीशायर परिवारका सन्तान, एडमन्ड ह्यालीले लण्डनको साउन पल स्कूलमा आफ्नो शिक्षाको शुरुआत गरे। उसको परिवार साबुन बनाउने मान्छेहरूको धनी समूह थियो। त्यस समयमा साबुनको प्रयोग युरोपभरि फैलिएको थियो, त्यसैले धेरै कमाउन उसको लागि ठूलो भयो।
लन्डनको ठूलो आगोमा उनका बुबाले ठूलो नोक्सान बेहोरे। यो आगो आगलागी भयो जब हैली अझै सानो थियो। यसको बाबजुद पनि बुबाले आफ्नो छोरालाई राम्रो शिक्षा दिन सके। यो शिक्षाको लागि धन्यवाद छ कि एडमन्ड ह्यालीको आफ्नै घरमा निजी पाठहरू थिए। उनी धनी परिवारमा बस्न न केवल भाग्यशाली थिए, तर उनी वैज्ञानिक क्रान्तिको अवधिमा थिए। यो क्रान्ति नै आधुनिक चिन्ताको जग थियो।
त्यस समयमा राजतन्त्र कार्लोस दोस्रो द्वारा पुनर्स्थापित गरियो र तिनीहरू4बर्ष भइसकेका थिए। धेरै वर्ष पछि, राजाले प्राकृतिक दार्शनिकहरूको अनौपचारिक संगठनलाई "अदृश्य विश्वविद्यालय" भनिने चार्टर दिए। यो संगठन हो जुन पछि विकसित भयो र लन्डनको रोयल सोसाइटीको नाम राखियो।
केही वर्ष पछि, १ 1673 मा, हेली अक्सफोर्डको क्वीन्स कलेजमा प्रवेश गरे। त्यहाँ उनी १ 1676 XNUMX। मा खगोलविद् रोयल नियुक्त भए। उनी खगोल विज्ञानको बारेमा बढी जान्न प्रोत्साहित हुन थाले र यसमा अध्ययन गर्न र प्रशिक्षण दिन थाले। वर्षौंपछि, १ 1696 1720 in मा, एडमन्ड ह्याली चेस्टर टकसालको नियन्त्रकको रूपमा नियुक्त भए। उनले न्यूटनलाई उनका धेरै कामहरूमा सहयोग गरे। अन्तमा, उनी १ 21२० मा खगोलविद् रोयल र ग्रीनविच वेधशालाको निर्देशक नियुक्त भए, जहाँ उनले २१ वर्ष काम गरे।
अब हामी विज्ञानमा उसले गरेको योगदान र उनी यति प्रसिद्ध भएको कारणहरूको बारेमा कुरा गर्ने छौं।
पहिलो सन्‌ १1682 in२ मा भयो जब उनी धूमकेतुको कक्षाको पूर्वानुमान गर्न सक्षम थिए जुन आज उसको सम्मानमा ह्यालीको धूमकेतु हो। उसले केवल पहिलो पटक कक्षाको बारेमा भविष्यवाणी गरेको थिएन, तर उसले १ 1758 मा उनी फर्कने घोषणा पनि गरे किनभने धूमकेतुहरू पनि कक्षाको पछि लाग्छन्। यस तरिकाले, उनले आफ्नो सिद्धान्तमा बचाव गरे कि त्यहाँ आफ्नो अण्डाकार ट्रैजेक्टोरीहरु संग धूमकेतुहरु छन् र ती हाम्रो संग सम्बन्धित छ। सौर्य प्रणाली.
अर्को योगदान भनेको न्यूटनसँग मिलेर ग्रह गतिहरूको मेकानिक्सको बारेमा व्याख्या गर्नु थियो।
१ 1691 XNUMX In मा, उनले टेम्स नदीमा परीक्षण गर्न सक्षम भएको डाइवि be बेलको निर्माणमा सहयोग गरे। यस डाइभि be बेलमा धन्यवाद, हेली एक घण्टा भन्दा बढी को लागी डुब्न सक्छ।
उनले "Synopsis astronomiae cometicae" जस्ता केही कार्यहरू गरे जसमा उनले धूमकेतुहरूमा न्युटनसँग विकास गरेका गति नियमहरूको बारेमा वर्णन गरे।
उनले हल्लीको धूमकेतुको मार्ग मात्र पत्ता लगाएन, तर उनले २ other अन्य प्याराबोलिक मार्गहरू पनि वर्णन गरे जुन सन्‌ १ 24 1698 to सम्ममा देखिएको थियो।
१ show3१, १ 1531 र १ 1607२ मा देखिएका historical ऐतिहासिक धूमकेतुहरू उनीहरूको विशेषतामा १ 1682, १ 1305० र १1380 मा देखिए जस्तै थिए। यो देखाउन तिनीहरू सक्षम थिए कि उही धूमकेतु थिए, तर तिनीहरू आफ्नो अण्डाकार मार्गबाट ​​फर्केका थिए भनेर देखाउन सक्षम थिए। ।
उनले भविष्यवाणी गरे कि हेलीको धूमकेतु १ 1758 मा फेरि पृथ्वीको नजिकै जान्छ।
खगोल विज्ञानमा अन्य महत्वपूर्ण योगदानहरू प्रदर्शन गर्नका लागि थियो कि तारहरूमा केही चाल थियो र ती सबैले एकै खालको आनन्द उठाए। उनले चन्द्रमाको पूर्ण क्रान्तिको अध्ययन गरे र खगोलीय टेबुलहरू बनाए।
एडमन्ड हेली लिगेसी
जब त्यहाँ एक वैज्ञानिक छ जब विज्ञानमा ठूलो योगदान र यती धेरै आविष्कारहरू हुन्छ, उसले विरासत छोड्छ। त्यो विरासत ह्यालीको धूमकेतु नै हो। उनको नाम सँधै मानिसहरुको दिमागमा रहनेछ जसले धूमकेतुसँग नजिकको सम्बन्ध राखेका थिए र जसको फिर्तीले उनी पूर्ण सटीकताका साथ भविष्यवाणी गर्न सक्षम थिए। उनका धेरै समकालीनहरू र वैज्ञानिकहरूको पीढी जसले उनलाई पछ्याए उनले उनको उच्च उपलब्धिहरूको लागि उच्च सम्मान गरे।
कहिलेकाँही आफ्नै आविष्कारका लागि सम्झनु भन्दा इसाक न्यूटनलाई प्रिन्सिपलहरू प्रकाशित गर्न उक्साउने व्यक्ति हुन भनेर उनलाई सबै भन्दा राम्रो याद हुन सक्छ। यो काम धेरैले विज्ञानमा मानिसको उपलब्धिलाई सबैभन्दा ठूलो स्मारकको रूपमा लिन्छन्।
विज्ञानको संसारमा न्यूटनसँग पहिले नै एउटा ज्ञात नाम छ जुन अघिल्लो खोजहरूले धन्यवाद दिन्छ। यद्यपि उनले आफ्नो अन्तिम प्रतिष्ठा कहिल्यै हासिल गर्न सकेनन् जुन उनले विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त प्रकाशित नगरेको भए शताब्दीयौंदेखि स्थिर रहन्छ। हेली भविष्यको लागि दर्शन भएको र सम्भव बनाउने व्यक्तिको रूपमा चिनिनेछ।
उसको लिगेसीमा हामी समावेश गर्न सक्छौं:
ह्यालेको धूमकेतु हेलीको नाम जहाँबाट उनले फिर्ताको भविष्यवाणी गरेका थिए।
मंगलवार मा हेली क्रेटर।
चन्द्रमामा हेली क्रेटर।
ह्याली रिसर्च स्टेशन, अन्टार्कटिका।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यस वैज्ञानिकले धेरै पक्षबाट विज्ञानलाई धेरै योगदान दिएका छन्। मलाई आशा छ कि यस जीवनीको साथ तपाईं एडमन्ड ह्यालीको बारेमा अधिक जान्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » एडमंड हली
खनिज र चट्टानहरू